Window Screen - China Hebei Samsung Metal Wire harato
Window Screen Fampidirana A varavarankely lamba, bibikely manidina lamba lamba na dia vy tariby, fiberglass, na hafa synthetic fibre harato, mivelatra ao anatin'ny toe-hazo na vy, natao mba handrakotra ny fanokafana ny misokatra varavarankely. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny mitandrina ravina, potipoti-javatra, ny bibikely, ny vorona ary ny biby hafa tsy hiditra ny trano na hanakona rafitra toy ny lavarangana fidirana, raha mamela rivotra madio-mikoriana. Ny ankamaroan'ny trano any Aostralia, Etazonia, ary Kanada no efijery rehetra operable varavarankely, whic ...
Supply Fahaizana: 1000 Roll / Rolls isan'andro
Window Screen Fampidirana
A varavarankely lamba, bibikely manidina lamba lamba na dia vy tariby, fiberglass, na hafa synthetic fibre harato, mivelatra ao anatin'ny toe-hazo na vy, natao mba handrakotra ny fanokafana ny misokatra varavarankely. Ny tanjona voalohany indrindra dia ny mitandrina ravina, potipoti-javatra, ny bibikely, ny vorona ary ny biby hafa tsy hiditra ny trano na hanakona rafitra toy ny lavarangana fidirana, raha mamela rivotra madio-mikoriana. Ny ankamaroan'ny trano any Aostralia, Etazonia, ary Kanada no efijery rehetra operable varavarankely, izay ilaina indrindra ao amin'ny faritra izay manana mponina moka lehibe. Taloha, efijery any Amerika Avaratra dia matetika no nosoloana tamin'ny tafio-drivotra fitaratra varavarankely amin'ny ririnina, nefa ankehitriny ny asa roa ireo matetika miaraka mitambatra amin'ny tafio-drivotra sy ny lamba varavarankely, izay mamela ny fitaratra sy ny lamba kobany mba solafaka ny miakatra sy midina.
Ny mahazatra indrindra fitaovana fitiliana ampiasaina ho an'ny bibikely sy ny ara-nofo dia fiberglass aluminium. Aluminium varavarankely lamba amin'ny ankapobeny voajanahary misy amin'ny aluminium na amin'ny arina ampiharina loko; ny saribao dia be tsy hita maso. Fiberglass tsy ampy amin'ny mazava fotsy ary koa ny saribao loko, ny saribao fanatitra tsara kokoa indray fijerena sy ny tarehy. Fiberglass no tsy lafo, ary manana ny tombony azo amin'ny tsy "denting" rehefa voa na nanosika. Na izany aza, ny fiberglass harato dia somary manjavozavo kokoa noho ny aluminium harato, izay manamaizina ny ivelany tarehin'ny am-baravarankely, ary mampihena ny habetsaky ny hazavana nampitaina avy any ivelany. Ankoatra izany, fiberglass lamba amin'ny hatsiaka haingana mampikororosy fahana ny UV fahazavana, nitarika azy fraying sy namaky rehefa afaka taona vitsivitsy, tsy toy aluminium izay maharitra be intsony.
Fa mitaky fampiharana hery lehibe, toy ny hanakona varavarana sy nylon sy ny polyester projection ihany koa misy.
Bronze bibikely projection fa tsy hoe zavatra lafo, fa manome ela kokoa noho ny asa fanompoana na aluminium na fiberglass. Rehefa fametrahana voalohany varavarankely lamba, dia manana volamena mazava loko; weathers izany any amin'ny maizina unobtrusive arina ao anatin'ny herintaona na latsaka. Bronze izany dia toa mahatohitra kokoa ny denting noho ny aluminium. Tsy dia mahazatra ahitana efijery lamba varahina, varahina, Stainless vy, ary ny tafo vy.
Ankoatra ny fitiliana bibikely, denser karazana lamba izay mampihena ihany koa ny masoandro sy ny hafanana misy tombony. Ireo manolotra manan-danja mety angovo tahiry amin'ny toetr'andro mafana.
Ataovy-it-tenanao sy ny endriny fanoloana efijery fitaovana be dia azo jerena ao amin'ny fitaovana sy ny fanatsarana fivarotana an-trano. Zana-kazo ireo dia matetika ahitana lafiny aluminium mivantana (izay azo lotika ny habeny) sy plastika zorony Manisika. Screen fanoloana matetika fitaovana javatra dia avy amin'ny horonan-projection lamba nylon sy ny malala-tanana famatsiana fingotra spline.
Previous: Fiberglass Plain tenona Wire Netting
Manaraka: Staninless Steel Wire harato
8x8 tenona Wire Screen
nandrisika Iron Window Screen
Stainless Steel Screen Wire harato
Anja Wire Screen
Construction harato Panel